White Boy Learning Burmese | The journey of an average white guy trying to learnanon-Indo-European language | Page 2
Books – စာအုပ်များ
Vocab — ဝေါဟာရ
The journey of an average white guy trying to learnanon-Indo-European language
by Win Hein	11 Comments
မြန်မာဖတ်စာ ဒုတိယတန်း ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ့။
အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်မှာ ကိုယ်တိုင် scannerရပြီမို့လို့ ဒီနေ့ မြန်မာဖတ်စာတွေကို ဆယ် scanဖတ်တာ စပါတယ်ဗျာ့။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့် စာအုပ်ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို သွားကြပြီ ဒေါင်လုဒ်လိုက်ကြပါ။
Hello everyone. Since I’ve obtained my own scanner, today I’ve started continuing to scan the Myanmar Readers. Please head on over to my “Books” page and download!
by Win Hein	4 Comments
Use Facebook in Burmese, fellow white people!
Ok, so Facebook is about 95% translated into Burmese. We’re still waiting on that last 5% but it’s gone up 1% since last night, so the team has been working very hard! However, dear white people, when it does finally come out in Burmese…
SWITCH YOUR LANGUAGE TO IT! Continue reading →
Categories: Addressed to the Whities, English | Permalink.
by Win Hein	1 Comment
ကျွန်တော့်လွန်းခဲ့တဲ့ ပိုစ်အကြောင်း လူတစ်ယောက်ဟာ ဒီလို့ ကျွန်တော့် Facebookမှာပြောတယ် (ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ပြန်ပြောခြင်း)။ မင်းတို့ ဘာစဉ်းစားတာလဲ
[DOWNLOAD UNICODE PDF HERE] (Right-Click —> Save As…) (Errors not fixed, yet / အမှားတွေကိုမပြင်ပေးသေးဘူး)
ကျွန်တော့် Facebookပေါမှာ Newsfeedကိုဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို link တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ linkက ဒီ ဓာတ်ပုံကိုညွှန်တယ်။ Continue reading →
Categories: ဝင်ဟိန်းရဲ့ ပြဿနာတွေ, Burmese -- မြန်မာစကား | Permalink.
by Win Hein	6 Comments
Poetry Translation [BUR –> ENG]: #2 Oh, Lover
[DOWNLOAD UNICODE PDF HERE] (Right-Click –> Save-As…)
Well, today my mother and I had to put two of our beloved cats (RIP Bear and Cinnamon) down (မြန်မာလို: ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မေမေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့က မြတ်နိုးတဲ့ကြောင်နှစ်ကောင်ကို မနာကျင်စေဘဲ သက်တောင့်သက်သာသေစေရန် လုပ်ရခဲ့တယ်။). So, to take my mind off of them, I’ve decided it’s time to translate another poem. This one was written byayoung poet named သဲသဲလေး who hasablog here: http://myanmarlovepoem.blogspot.com/ The title is called “ချစ်သူရယ်” (Eng: Oh, Lover). As always, I’ll provide first an interlinear version,aliteral English version, and an English rendering. Continue reading →
Categories: English, Poetry Translations | Permalink.
by Win Hein	5 Comments
Poetry Translation [BUR –> ENG]: #1 From The Bosom of A Lover
[DOWNLOAD UNICODE PDF HERE] (Right-Click –> Save As…)
Hello All! I would like to try something new today, which is translatingasimple Burmese poem into English. I may make thisaregular habit, as I figure this flowery Burmese would be good for my practice. First, I will display the Burmese poem with the interlinear English, renderaliteral English translation, and then createamore “poetic” English version. The poem for today is called “ချစ်သူ့ရင်ခွင်”(Lit: The Lover’s Bosom) and I can’t exactly credit the author, but I “borrowed” the post from this blog: http://mgwinsoe.blogspot.com/2008/09/blog-post_08.html Continue reading →
ယူနီကုဒ်လိုရေးထားတဲ့ PDFကို ဒေါင်းလုဒ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကိုနှိပ်ပါ။ (Right-Click –> Save As…)
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မြန်မာလို မရေးတာကြာပြီမို့လို့ ဒီနေ့ပုစ်တ် တစ်ပုဒ်ကိုရေးထားမယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘလောဂ်ပေါ်မှာမရေးပေမယ့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဗမာစာ၊ဗမာစကားတိုးတက်နေတယ်လို့ကတိထားပါတယ်ဗျာ့။ အခုတော့ တက္ကသိုလ်မှအနားယူနေမို့လို့ စပိန်လိုထက်နဲ့ ဂျာမန်လိုထက် ဗမာလိုပိုရေး ပြီး ပိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ထင်တာက အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေလိုလည်းပြောသင့်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့် ဘွဲ့ရဖို့ ဘာသာစကားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ ;D။ ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ကျွန်တော် မြန်မာ ယူနီကုဒ် အကြောင်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဗျာ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ ပုစ်တ်မှာ ယူနီကုဒ်လိုရေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိတာက ကျွန်တော့်ပိရိတ်သတ်အများစုက ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသုံးမို့လို့ ဘလောဂ်ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီလိုပို့ထားပါမယ်။ Continue reading →
Escaping the Pronoun Maze
[SPANISH –> ENG/ BUR] Cuando Me Enamoro
Addressed to the Whities
Burmese — မြန်မာစကား
Linguistics / ဘာသာဗေဒ
Candy Khine's Blog
Chindwin Journal's List of Burmese Blogs
Kyaw Swah Toon's Ubuntu and Android Notes
Living With Dreams (in English)
Madyjune's Blog in Burmese
Myanmar Love Poems
U Myo Myint's Blog
Burmese IPA Converter
Join WBLB's Official Facebook Group!
Myanmar Flash Songs
SEALang Sala- Burmese Articles
So You Want to LearnaLanguage?'s Burmese Page
Stuary Jay Raj's Website
The Best English4You (in Burmese)
Tun Institute of Learning